မြန်မာ့ခံတွင်းနဲ့ပနံသင့်စေမယ့် ပထမတန်းစား Pizza အရသာကိုခံစားလိုပါသလား??? – FoodiesNavi
အခုတလော အစားတလိုင်းတို့ကြားမှာ Pizza ?ဟာအရမ်းရေပန်းစားနေပါတယ်။ ကလေး?လူကြီး??မရွေးကြိုက်နှစ်သက်ကြပြီး အဆာပြေပဲစားစား အဝပဲတွယ်တွယ် အဆာခံတာကြောင့်မနက်၊နေ့လည်၊ညမရွေး Pizza ? ကိုစားလာကြပါတယ်။ မြန်မာတွေနဲ့ အနည်းငယ်စိမ်းတဲ့ Pizza ?ကိုကြုံရာဆိုင်မှာ ဝင်စားမယ်ဆိုရင်တော့ အချိုအငံအစပ်အဟပ်မတည့်ဘဲ အရသာမတွေ့လို့ မစားလိုက်ရဘဲငွေကုန်ကျတာတွေရှိဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီတော့ Foodies Navi ကနေမြန်မာခံတွင်းနဲ့ကွက်တိဖြစ်ပြီး လျှာလည်စေမယ့် The Pizza Company ဆိုင်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
Pizza ကြိုက်သူတွေ တော်တော်များများသိပြီးသားဖြစ်ပေမယ့် လမ်းကြုံတဲ့နေရာမှာ ဝင်ဆွဲနိုင်ဖို့ ဆိုင်ခွဲလိပ်စာလေးတွေကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
No-1. Dagon Center (1) 01-534036 No (262/264) Pyay Road, Dagon Center, San Chaung Township
No-2. Ocean Shwe Gone Daing 09-73491202 No(116/118), Corner of Shwe Gone Daing Road & BaNyarDala Road, Bahan.
No-3. Myanmar Plaza 09-456051303 No(192) Myanmar Plaza, Kabaraye Pagoda Road, Bahan
No-4. Myanmar Culture Valley 09-767927517 Room G3 , Myanmar Culture Valley , People Park, Oo Wi Za Ya Lann, Dagon Township
No-5. Bogyoke 09-423351123 No (359/363) Ground Floor, Corner of 31 st & BoGyokeAungSan Road
No-6. Mandalay 09-424251137 73st, Block-7, Unit-12, Mingalar Mandalay
No-7. Junction Square 09-401705252 Building 4, Ground & first floor, Junction Square pyay road, Kamayut Township
စားသုံးသူတွေလျှာလည်စေမယ့် အရသာအသစ်သစ်တွေကို အမြဲဖန်တီးပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ The Pizza Company ဆိုင်တွေမှာတော့ အရသာမှာသူမတူထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ ဂျမ်ဘိုပီဇာပတ်(ဖ်) , Bread Sticks , Double Sausage Pizza , Fish Fingers , Chicken Sticks , BBQ Chicken Deluxe , Super Deluxe , Stir Fried Pasta with Smoked Salmon , Italian Sausage , Stir Fried Pasta with Seafood in Thai Spicy Sauce , Tom Yum Kung , Double Pepperoni , Crispy Shrimp Salad , Seafood Cocktail , ဝက်နံရိုးကင်နဲ့အာလူးကြော် , Bacon Super Delight , Korean Style Chicken Wings,Smoked Salmon Salad စတဲ့ Menu ဆန်းဆန်းလေးတွေကို ထူးထူးခြားခြားခံစားသုံးဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Menu ပုံလေးတွေကြည့်ရုံနဲ့တင် သွားရည်ယိုစရာကြီးနော် ။ အရသာကလည်း တကယ့်ပထမတန်းစားမို့ တစ်ခါစားပြီးတစ်သက်တမ်းတမ်းစွဲသွားစေမှာပါ။
The Pizza Company ရဲ့ထူးခြားတဲ့ဝန်ဆောင်မှုကတော့ ဒဂုံမြို့နယ် ၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ် ၊ ကမာရွတ်မြို့နယ် ၊ ဗဟန်းမြို့နယ် ၊ တာမွေမြို့နယ် ၊ ရန်ကင်းမြို့နယ် ၊ အလုံမြို့နယ် ၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် ၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ၊ ပန်းပဲတန်းမြို့နယ် ၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ် ၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ၊ လသာမြို့နယ် ၊ လမ်းမတော်မြို့နယ် ၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် ၊ တောင်ဥက္ကလာပ (ဝေဇယန္တာလမ်း)ထိ ၊ သင်္ဃန်းကျွန်း(Junction Zawana)ထိ မှာနေထိုင်ကြတဲ့စားသုံးသူတွေကို အိမ်တိုင်ရာရောက်ပို့ဆောင်ပေးမယ့် အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ် ? ။ ? 09960884884 ကိုဆက်သွယ်လိုက်ရုံနဲ့ The Pizza Company ရဲ့ A La Carte Menu ကိုအလျှင်မြန်ဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်လို့ အပြင်ထွက်စရာမလိုဘဲ အိမ်မှာတင်ဇိမ်ကျကျနဲ့ အရသာရှိတဲ့ အစားအစာကောင်းတွေကို မှာယူသုံးဆောင်နိုင်မှာဆိုတော့ ရှယ်လန်းတယ်နော်။
Image Source : www.facebook.com/thepizzamyanmar